GIMP ... aiza no eny ary aiza indraindray. | Avy amin'ny Linux
GIMP ... aiza no eny ary aiza indraindray.
Tina Toledo | | fampiharana, GNU / Linux
“Mpanompo marina enina no nampianatra ahy ny zavatra fantatro;
ny anaran'izy ireo dia hoe, rahoviana, aiza, inona, iza ary nahoana. "
Rudyard Kipling (1865-1936) mpanoratra tantara anglisy
Matetika, ireo mpankafy rindrambaiko maimaimpoana tohanan'ny fanoharana manaitra dia manaporofo, amin'ny finoana tsy misy isalasalana, fa GIMP fitaovana tena tsara izy io saingy noho ny antony tsy fantatra dia tsinontsinona ny indostrian'ny famolavolana sary.
Hatreto dia mahaliana ilay teboka, satria marina ny tena marina: ny ampahany lehibe amin'ny vondron'olona manao sary dia tsy mahalala ny fisian GIMP ary ireo izay mahalala azy dia tsy manome toetra mendrika azy hanolo maharitra Adobe Photoshop.
Ny olana dia manomboka rehefa miditra an-tsehatra ireo radika "Sokajy ary tsy isalasalana" izay tsy ampiasain'ny mpamorona sary GIMP satria tsotra izahay "Fotochoperos" ary ny fahaizantsika matihanina dia tsy mihoatra ny fampiharana ireo sivana tsy misy hatrizay Photoshop. Ny fanamafisana ny zavatra toy izany dia manomboka amin'ny zavatra iray ihany: tsy raharahianao izay fahasamihafana sy fitoviana misy eo amin'ny asa iray sy ny iray hafa, ary alohan'ny hanandramako hanazava azy ireo dia tsy maintsy ataoko mazava tsara fa GIMP Izy io dia fitaovana tena tsara izay afaka manompo mpanao sary iray manontolo ary misy famandrihana sasany mpamorona sary. Rehefa avy nilaza an'io isika, dia andao hanohy hanazava izay ataon'ny iray sy izay ataon'ny iray hafa.
1 Ny fanoharana momba ny mpitendry jazz sy ny orkesitra
2 Miteny amin'ny volafotsy
3 Ny fehin-teniko
Ny fanoharana momba ny mpitendry jazz sy ny orkesitra
Ilay mpanao sary an-tsary dia toy ny mpitendry gitara jazz izay nandika ny lohahevitra omaly Miankina betsaka amin'ny fahaizany ara-teknika izany, saingy ny kalitaony amin'ny fandikana dia hita taratra amin'ny fahaizany manatsara ny fahatsapana. Inona no dikan'ity? Izay ny tehaka sy ankasitrahan'ny besinimaro dia ny "Fahatsapana" izay apetraky ny gitara rehefa mandika ilay hira ary izay no manome lanja fandikana azy. Ity dia momba ny taratry ny fahatsapana.
Etsy ankilany, ireo mpitendry mozika ao amin'ny orkesitra symphony koa mahay mandika omaly fa, tsy toy ny mpilalao jazz, ny hatsaram-panahy isam-batan'olona dia eo am-pelatanan'ny vondrona iray -ny orkesitra- ary tsy maintsy mandray anjara amin'ny fotoana tena izy ny tsirairay, ary tsy mamela toerana ho an'ny fanatsarana tsirairay. Ny tsirairay amin'izy ireo dia fehezin'ny torolàlana voatondro, naoty tokana tsy misy toerana na dia tsy diso aza dia heverina ho hadisoana. Izany no fiasan'ny mpamorona sary.
Miteny amin'ny volafotsy
"Tena tsara Tina... ary inona no ifandraisan'izany amin'ny iray mahay mampiasa GIMP 100% fa tsy ny iray hafa? " hanontany tena izy ireo. Andao ary haka ohatra iray hafa:
Eritrereto hoe misy mpanjifa manafatra marika amiko ho an'ny zava-pisotro misy alikaola ho an'ny ankizy, dia hatao pirinty amin'ny inks valo ilay asa Polypropylene ny alalan ' flexography ary tiany hitondra ny sarin'ny ankizy mpivady toa falifaly aho.
Andao apetraka daholo ny pitsopitsony ara-dalàna izay tsy maintsy misy ny marika mba hifantohana amin'ny lafiny sary:
Afaka mampiasa mora foana ilay mpanao sary GIMP mba hamoronana sary iray na maromaro an'ny zazalahy. GIMP manana fitaovana ilaina -borosy, sosona ary vokatra manokana- raha hanao asa tena tsara ary, amin'ity tranga ity, tsy maninona fa tsy tantiny ny rafitra miloko CMYK satria hatramin'izao dia ny hiasa no idealy RGB, izay GIMP tena tsara. Toy ny mpilalao jazz, ny mpanao sary dia hiezaka ny hisaintsaina fihetseham-po na fihetsika, amin'ity tranga fifaliana ity, ary hankatoavina amin'izany ilay sary.
Raha vantany vao ekena ny sary dia alefa eo am-pelatanan'ny mpamorona sary izay, alohan'ny hametrahana azy amin'ny famolavolana marika, dia tsy maintsy MAFY fa hatao pirinty tsara ilay sary ao anaty inks valo amin'ny flexography, koa amboary ny rakitra GIMP hampisaraka ny loko amin'ny fantsona valo -ireo hampiasaina amin'ny fanontana- ka ny sary vita pirinty dia toa tsara toa ilay nomerika ihany. Eto dia manomboka ny olana ... GIMP aza mitondra fiara loko voatanisa ho an'ny inks iraisana noho izany ny asa dia tokony hatao amin'ny rindrambaiko afaka manao azy. Toy ny orkesitra symphony, ny mpamorona sary dia tsy mieritreritra ny famindrana ny fahatsapana ho tanjona voalohany, fa kosa mametraka ny fahalalany hamaha olana amin'ny lafiny rehetra: fa tsara ilay marika vita pirinty. Ary ho an'izay dia tsy maintsy manaraka ny torolàlana manamarika ny fomba hanontana ny asa ianao.
Ny zavatra tsy maintsy hitanao, raha tsy misy fitiavana, dia azo antoka GIMP Izy io dia fitaovana tsara ho an'ireo izay mampivelatra ny sanganasa izay ny tanjony dia ny fanaovana kopia nomerika, fa ho an'ireo izay hatao pirinty amin'ny alàlan'ny rafitra analog dia tsy mandeha foana izany.
Eto dia ny famokarana bebe kokoa ity tranga ity satria, farafaharatsiny izaho, tsy hitako ny fampiasana ilay tranga GIMP hanao antsasaky ny asa ary avy eo hamindra izany Photoshop hanao zavatra ao amin'ny GIMP voafetra na tsy afaka manao.
Manantena aho fa tsy hatao fitsikerana tsy misy indrafo ity fampirantiana ity GIMPMifanohitra amin'izany aza, toa fahitan-javatra tsara ho ahy izay azo ampiasaina hanamboarana karazana sary ary azo ampiasaina amin'ny sehatry ny famolavolana sary raha toa ka fantatsika ny fetrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » GIMP ... aiza no eny ary aiza indraindray.
Miombon-kevitra aminao aho, mpamorona sary aho ary ho an'ny tetikasako dia mampiasa rindrambaiko maimaimpoana aho, amin'ny asa ampiasainay dia manana tompony izahay. Tsaroako fa rehefa nanamboatra canvas amin'ny inkscape aho ary nandefa azy tamim-pifaliana hanonta (avy amin'ny png, satria tsy misy endrika mampiditra inkscape ny rip, ny tiff ihany fa tsy manondrana azy io amin'ny inkscape) ny tranga dia ny loko mankany amin'ny raha hatao pirinty dia nahatsiravina izy ireo !! fa izay lazaina Mahatsiravina! loza iray, raha mpamorona endrika ny olona iray, fantatro fa mahatakatra ahy izy ireo rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra tadiaviny ny asa iray. Na eo aza izany dia tsy nilavo lefona aho ary namono ny mombamomba ny loko na ny rip na ny corel ary ny tiff fa tsy nandefa azy tamin'ny cmyk dia nalefako tany amin'ny rgb, ary izany dia nanome valiny tsara tamin'ny fanontana.
Raha fintinina, ny gimp sy ny inkscape dia tena tsara amin'ny asa nomerika sy vita pirinty raha tsy tsy misy fisarahana loko toy ny amin'ny fanontana nomerika dia safidy tsara izy ireo, fa raha asaina alefa offset, raha tsy miasa amin'ny rakitra izy ireo, dia izany no ratsy indrindra ...
Ary araka ny filazan'i Tina, ny fanamarihako dia tsy fitsikerana tsy misy indrafo, fa kosa teboka tokony hanatsarana ireo programa maimaimpoana ireo.
Mamaly an'i hektor
Marina indrindra, iray amin'ireo olan'ny InkScape ny tsy fitovizany indrindra amin'ny RIPEny, izany dia satria ny fiteny postcrip ihany no alainy tahaka satria teknolojia fananana izy io ary tsy azonao ampiasaina. Toy izany koa no mitranga amin'ny fikirakirana endrika PDF.
Ny zavatra matotra amin'ity raharaha ity dia izy roa postcrip como el PDF fananan'ny Adobe ka hitako somary manahirana ilay raharaha.
Lahatsoratra tena tsara, liana liana tamin'ity lohahevitra ity foana aho ary nanazava ny fisalasalana maro.
Fanontaniana: Mampiasa Photoshop amin'ny Linux avy amin'ny divay na milina virtoaly ve ianao, sa manana Windows amin'ny fizarazarana hafa ianao ary mifamadika aminy rehefa tonga ny fotoana photoshop? Te hahafantatra momba an'io koa aho satria mieritreritra an-tsary fa tsy tokony ho mahantra ny fahombiazan'ny Photoshop amin'ny Linux ary mety tsy hitazona ny endriny rehetra.
Ho an'ny fizotry ny famolavolana sary dia ataontsika daholo izay macOS X, mbola tsy nampiasa mihitsy izahay Photoshop avy amin'ny Divay mba hanatanterahana asa matihanina, na izany aza dia nanao fitsapana vitsivitsy ... Tapitra ny famoizam-po noho ny faharetan'ny fizotrany.
Misaotra betsaka. Matetika ampy ahy ny GIMP, saingy rehefa mila Photoshop aho dia aleoko mampiasa azy io avy amin'ny Windows, nanana fisalasalana aho raha ho tsara kokoa ho ahy ny mampiasa azy avy amin'ny divay saingy hitako fa tsy izany. Mamerina ny fisaorana anao. 🙂
moscosov dia hoy izy:
Andininy 3 no novakiako ary mieritreritra aho fa raiki-pitia ...
Mamaly an'i moscosov
Miomana amin'ny famoizam-po mafy HAHAHA
hahahaha lazaiko fa raiki-pitia tamin'ny asa soratako aho.
Efa nandalo ny fanaintainana fitiavana rehetra izay tsy maintsy nolalovana aho, aorian'izay dia mila mifalifaly fotsiny ianao.
Ny fitiavana no baomba ratsy indrindra aorian'ny baomba ataomika ahahaha
Ho ahy io no zavatra mahatsiravina indrindra misy, ary mba tsy hanarahana ny offtopic dia avelako ity rohy ity izay misy roa hafa izay anazavana ny fomba fijeriko.
Hilaza amiko ve ianao fa mbola tsy nanana fanandramana tsara toy izany?
Eny, izaho irery no zavatra ratsy indrindra nitranga tamiko teo amin'ny fiainako, raha ny marina. Ny antony dia miharihary amin'ny iray amin'ireo lahatsoratra
Fialan-tsasatra inona no entinao! Andao hojerentsika raha rahampitso mampihatra ny fanadinana aho, azonao atao ve ny milaza amiko hoe inona ireo loko efa voatanisa, anaka herim-po. 😀 😀
«Zaza be herim-po»…. JUAZ JUAZ JUAZ !!!!! Tany no nanomezanao azy !!!! TPT!!!!!
farango tamin'ny valanorano izany
Ny hany nomeko tany an-tsekoly momba ny famolavolana sary dia ny lohahevitra antsoina hoe "Digital Image Editing", izay tsy nandalovako ny taranja manontolo satria nanana mania ho ahy ilay mpampianatra mba ahitanao ny fahalalako ...
Ary tsy zaza aho, ny zava-mitranga dia efa antitra mihoatra ny 20 taona ianao
Mazava fa ny lahatsoratra tsara nataon'i Tina dia nanokatra endrika fifanakalozan-kevitra mahaliana 2, iray amin'ireo fitaovana an-tsary an'ny GNU / Linux sy ny fampiharana azy ary etsy ankilany ny fitiavana, ny fahasarotan'ny fifandraisan'ny mpivady sy ny taonan'ny Courage.
Azoko tsara ny zava-misy ary am-pahatsorana satria tsy mpamorona sary aho, tsy tiako akory izany ary tany amin'ny lisea aho dia nandiso ny zava-drehetra nifandraika tamin'ny famolavolana, tsy afaka naneho hevitra marina momba ilay lohahevitra aho.
Tena tiako io !!! Tsy dia manam-pahalalana aho raha ny amin'ny famolavolana sary, fa tiako ny fomba tanjona sy azo ampiharana izay nanombohanao ny lohahevitra. Raha ny marina, tsy nahita na aiza na aiza valiny mazava sy tsy azo resena aho ho an'ny lohahevitra "Gimp VS Photoshop" (raha lazaina).
Ny fomba fahitako azy, mazava ho azy ireo karazana tetikasa ireo dia mila manatsara zavatra efa vita, fa ny fahamendrehan'i Gimp dia ny manome ady lehibe ho an'ny lehibe toa ny Photoshop, miorina amin'ny vondrom-piarahamoniny manokana.
Ny tontolon'ny SL dia tena mahafinaritra sy mahatalanjona 😉
Misaotra arivo Perseus, Mitovy hevitra aminao aho; GIMP tsy maintsy hatsaraina amin'ny teboka maromaro na dia mazava ho azy aza fa ady io Photoshop.
muadib dia hoy izy:
Fanamarihana tena tsara, ary be mpanome vaovao ihany koa.
Manantena aho fa hihatsara hatrany ny GIMP amin'io lafiny io, raha ny tanjonao dia ny hikendry ny hisolo tanteraka ny Photoshop.
Ankehitriny dia tiako ho fantatra izay mahavita an'i Krita
Mamaly an'i muadib
Salama te hanontany ny mpamorona momba an'i Krita aho, novakiako hatrany fa ny fetran'ny gimp amin'ny ambaratonga matihanina dia ny tsy fanohanany ny cmyk sy ny olan'ny isan'ny bitsika isaky ny fantsona, na izany aza raha ny fahalalako azy dia mifanaraka amin'ireo lafin-javatra ireo.
Te hahafantatra izay eritreretinao mpamorona aho, raha fantatrao izy ary azony atao ve ny manatanteraka na tsia amin'ny sehatra matihanina. Mitovy amin'ny Karbon amin'ny sary vector, fisaorana ary arahaba!
Valiny amin'ny jORGE
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatra dia ny programa famolavolana sary dia mizara ho vondrona lehibe telo:
1.-Avy amin'ny sary an'habakabaka:
Scape amin'ny ranomainty
3.-Fandraisana an-tanana sary raster (mifototra amin'ny teboka):
Karbon Izy io dia programa tsara hanehoana sary, maro no mampiasa azy io koa amin'ny layout satria manana fananana mampitombo izy ary afaka manompo amin'ny fomba lavorary mamorona bokikely nomerika na magazine izay haparitaka amin'ny endrika PDF. Tsy mamporisika azy io ho toy ny rindrambaiko azo antoka amin'ny famoronana tahiry prepress.
tsaoka Izy io dia programa iray hanehoana sary an-tsaina fa tsy hanamboarana sary retouch, ary manana tombony azon'ny ankamaroan'ny takelaka fanaovana sary nomerika, izay tombony lehibe. Nampiasako izany mba hanaovana fanoharana vitsivitsy, toy ity sarimiaina ataon'ny namana sy mpanompo sasany ity: http://img223.imageshack.us/img223/1804/cartoon7nc.jpg
Voalohany dia manana fanontaniana aho:
Vondrona iza no an'ny Adobe Fireworks?
Faharoa, raha ny hevitro:
Heveriko fa ny tsy ampy an'ny GIMP dia ny mpamorona sary mamolavola azy miaraka amin'ireo mpandahatra programa. Ny ankamaroantsika programmer dia tsy tena mahatakatra izany momba ny mombamomba ny loko sy zavatra hafa mifandraika amin'ny famolavolana. Ny zava-misy tsotra azontsika atao pirinty dia ampy ho antsika. Na dia ekeko aza fa misy singa, toy ny sivana izay tompony ary sarotra ny manana azy ireo amin'ny fampiharana maimaimpoana. Tsy misy isalasalana fomba fijery mahaliana sy bebe kokoa satria hita amin'ny lafiny iray izy io.
afomanga Tsy tafiditra ao anatin'ny vondrona telo nolazaiko teo aloha izy io, na dia mety ampiasain'ny mpamorona sary aza izy io, lozisialy hampivelarana pejin-tranonkala.
Raha ny hevitrao, tsara, holazaiko aminao fa efa nandefa ireo mpamorona ny GIMP sosokevitra maromaro, na izany aza ny olana dia ny fampandrosoana ny GIMP dia miadana tokoa ary toa mifantoka kokoa amin'ny fahitana -varavarankely fitaovana mitsingevana mba hampidirina amina varavarankely tokana miaraka amin'ny sehatr'asa- noho ny fiasa.
Raha tsara ihany koa raha namorona ny milina fanoratan-dry zareo ICC izy ireo -http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_ICC#Est.C3.A1ndares_de_facto- satria ho hitanao fa ampihimamba ny raharaha Adobe.
Ny zavatra ratsy amin'ny tetikasa maimaimpoana dia ny ataon'ireo mpandahatra programa ho fialamboly. Noho io antony io, ny fampandrosoana miadana, na dia toa tsy misy aza izany indraindray.
Avy amin'ny zavatra hitako Apple sy Adobe mizara mofomamy miaraka amin'ny fenitra. Tokony ho hitanao ny tsindry avy amin'ny AMD mankany amin'ny GIMP, toy ny nvidia amin'ny Adobe. Fa tantara hafa indray izany.
Miarahaba anao ary tsara fa mamela tolo-kevitra ho an'ny ekipa GIMP ianao. Manantena aho fa misy bebe kokoa ary hifantoka amin'ny teboka malemy nolazainao izy ireo.
Tena tsara ny lahatsoratrao. Mizara ny sasany amin'ny hevitrao aho ary maro amin'ireo tohan-kevitra napetrakao no toa tena mitombina sy avoaka. Saingy ny famakafakana rehetra dia mihevitra foana (ankoatry ny tanjona) sokajy sy fepetra mamaritra ny fomba fametrahana ny fanontaniana.
Ny zavatra tiako haleha dia ny fomba hafa iray, fanatonana an'ity olana ity, izay hitako fa mahaliana; ary ity manaraka ity:
Raha ny fifandraisana an-tsary (ho an'ny tanjona matihanina na tsia), ny rindranasa na programa amin'ny famoronana sy fanovana atiny nomerika nomerika (toy ny Gimp na Photoshop, ankoatry ny maro hafa) dia fitaovana na fitaovana teknika misy, ary koa fakantsary, hety, loko, takelaka X-ray, borosy sns. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia fitaovana azo ampiasaina izy ireo, tsy vitan'ny hoe, ihany koa, amin'ny famolavolana sy famoronana asa-tanana na vokatra an-tsary.
Amin'io lafiny io, ny fitaovana tsirairay dia mety misy ifandraisany (na ilaina mihitsy aza), tsy azo ampiasaina (na tsy ilaina) arakaraka ny tanjona ho tratrarina.
Etsy an-danin'izany, eo ny sehatry ny fahatsapana, izany hoe ny toe-piainan'ny mpampiasa sy ny toe-javatra ampiasan'izy ireo ny fitaovana (mpamorona sary, mpanakanto sary, olona te-hamerina hamerina sary, sns. ).
Mba tsy hanaovana lava kokoa ity fanehoan-kevitra ity dia lazaiko fa, raha io fomba fijery io dia tsy misy dikany ny mieritreritra fa ny Gimp na ny Photoshop dia "matihanina kokoa" na "mety kokoa amin'ny mpamorona sary" noho ny hafa. Eny, toy ny hety na borosy dia fitaovana izy ireo ary ny zava-dehibe dia ny fanararaotana ny tsirairay amin'ny fotoana mety.
Andao hieritreritra ny afisy doka na sary nomerika heverintsika fa tsara. Andao hieritreritra ny maro amin'izy ireo izay paradigma amin'ny fifandraisana an-tsary nomerika, andao hieritreritra ireo endrika sary tsara indrindra hitantsika isika, amin'ny inona ny lazany, ny maha-matihanina azy na ny fahombiazany? Heveriko fa tsy miankina amin'ny photoshop na Gimp izany, ary mieritreritra aho fa ho an'ny ankamaroan'izy ireo, na ny roa amin'izy ireo dia fitaovana be dia be.
Ka tsy mila mampitaha azy ireo ianao? Mazava ho azy. fa tsy noho ny karazana mpampiasa afaka mampiasa azy ireo, fa noho ny fahaiza-manaony sy ny fetrany manokana arakaraka ny mason-tsivana sy teknika fampiasa.
- Matsiro ny asanao. Manana kalitao izy io.
Heveriko fa mbola misy naoty vitsivitsy sisa tavela.
Izay ihany. Ny fanesorana azy ireo dia ho lavorary.
Emperoran'i Aotrisy Joseph II
- Ary firy naoty no heverinao fa ambiny, Andriamatoa?
Hola telo ambin'ny folo:
Voalohany indrindra dia misaotra anao aho noho ny hevitrao, izay azoko tsara fa miombon-kevitra amin'ny zavatra sasany isika fa tsy amin'ny hafa.
Nahaliana ahy ny andalana iray taminao:
“Andao hieritreritra takelaka fisoratana anarana na sary nomerika izay heverintsika ho tsara. Andao hieritreritra ny maro amin'izy ireo izay paradigma amin'ny fifandraisana an-tsary nomerika, andao hieritreritra ireo endrika sary tsara indrindra hitantsika isika, amin'ny inona ny lazany, ny maha-matihanina azy na ny fahombiazany? Heveriko fa tsy miankina amin'ny photoshop na Gimp, ary mieritreritra ho an'ny ankamaroan'izy ireo aho, na iray aza amin'ireo dia fitaovana sisa tavela. "
Voalohany indrindra dia tiako ny hanazava zavatra roa: ny voalohany dia ny fitsikerana hataoko dia ampahany amin'ny tsy fahalalako momba ny zavatra niainanao tamin'ny endrika mpamorona sary. Ny faharoa dia nasiako "sahy" ilay ampahany hitako fa mahaliana ahy indrindra ary tsy ekeko.
Nahoana aho no manazava ireo zavatra roa ireo? Amin'ny lafiny iray, satria olona manana traikefa an-taonany ihany -Ary miresaka momba ny looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo taona maro aho- amin'ny fampiasana ny GIMP y Photoshop afaka mikaroka fehezanteny toy izany ianao, koa ny fanontaniana takiana dia: mifototra amin'ny zavatra niainanao -tsy izay nolazaina anao na izay novakianao tany an-kafa- Inona no ambiny GIMP y Photoshop?
1.-Na eo aza ny ohatra nomeko, ny fizotran'ny famoronana an-tsary (http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_%28arte%29) miaraka amin'ny famolavolana sary (http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico).
2.-Ireo fitaovana ampiasaina amin'ny tranga roa dia mety hitovy ary, averiko ihany, manan-kery ho an'ireo tranga roa ireo raha, ary raha tsy misy, ny fampisehoana farany dia famokarana nomerika, fa ho an'ireo izay hatao pirinty amin'ny fampiasana analog rafitra. tsy mandeha foana io.
Salama Tina. Ankasitrahako ny valin'ny fanehoan-kevitra nataoko. Te-hanazava amin'ny alàlan'ny fampitahana aho fa, tsy toa an'i José II, tsy heveriko fa manome "naoty" amin'ny famakafakana nataonao izy, satria amiko dia nahavita be tokoa izy io ary mifanaraka amin'ny mason-tsivana atolotrao. Ny hevitro dia nanana fikasana hamaritra fomba hafa mety hametrahana ilay fanontaniana, ary tsy hiheverako ho tsara kokoa na ratsy kokoa ao aminy, tsy dia miavaka loatra, hafa fotsiny. Raha ny marina dia mety diso aho na, araka ny fanamarihanao, mampidi-doza ny didim-pitsarako.
Tsy mpamorona sary aho, ny asako matihanina dia mifandraika amin'ny psikolojia sy ny filozofia (momba ny olana ara-piheverana, ny etika ary ny hatsarana), saingy nandritra ny taona maro dia natokako ny ampahany amin'ny fiainako, ho an'ny fahafinaretana sy faharesen-dahatra, ho an'ny famoronana sy fankasitrahana ny kanto hita maso; ary noho izany antony izany no nahaliana ahy hianatra hampiasa fitaovana sary niomerika toy ny photoshop, corel, gimp, sns.
Mety mieritreritra ianao fa satria tsy mpamorona sary aho, dia tsy manana antony ampy tsara ahafahana mitsara araka ny tokony ho izy momba an'io lohahevitra io, ary angamba izany. Saingy manizingizina aho fa ny famakafakana rehetra dia faritan'ny mason-tsivana ary ilay nampiasako dia ny sanda ara-pahaizana, ara-javakanto na azo ampiharina tsy miankina amin'ilay fitaovana ihany, fa amin'ny fanatanterahana ireo tanjona. Raha te hampitaha hety roa isika dia tsy maintsy ataontsika izany noho ny sisiny, ny habeny, na ny fitantanany, sns. Fa ny maha-matihanina dia eo am-panaovana azy, ao amin'ny foto-kevitra ary amin'ny valin'ny asa na ny vokatra.
Ary izao dia valiako ny fanontanianao. Araka ny zavatra niainako, ny sary nomerika tsara indrindra vitako ary hitako (noho ny fiasan'izy ireo na ny toetrany kanto) dia samy manana ny asany ilaina mba hanatrarana izany ny Gimp sy ny Photoshop nefa tsy mila mampiasa ireo fahafaha-manao rehetra ananan'ireo manolora programa roa, ary, amin'io lafiny io, no nilazany fa nijanona izy ireo. Ireo fitaovana dia azo ampitahaina, amin'ny fomba fijery maro, fa ny jeneraly dia mitoetra amin'ny fampiasana araka ny tokony izy ireo fitaovana misy hahazoana ny valiny tadiavina. Tsy ny fitaovana no mahatonga ny asa, raha tsy ny teknika hampiasana azy ireo. Ary tsy ny asa ihany no mahatonga ny mpampianatra fa ny dikany sy ny lalana omena an'io asa io.
TPT! Fa misalasala izahay, samy mitondra labozia!
Misaotra arivo telo ambin'ny folo ho an'ny hevitrao.
Hanonona anao indray aho ary hataoko sahisahy mafy izay heveriko ho manan-danja:
«Araka ny zavatra niainako, ny asa tsara indrindra an'ny sary nomerika izay efa nataoko ary hitako (noho ny fiasa na ny toetrany kanto) dia samy manana ny asany ilaina ny Gimp sy ny Photoshop hahazoana izany nefa tsy mila mampiasa ireo fahafaha-manao rehetra atolotry ireo programa roa ireo, ary izany dia, tamin'io lafiny io dia nilaza izy fa tavela izy ireo. "
Manaiky tanteraka, fa raha ny tena izy dia tena nitovy tamin'ny ahy ny niadian-kevitra tamin'ny famaranana ny lahatsoratra lehibe:
"… Azo antoka GIMP dia fitaovana tsara ho an'ireo izay mampivelatra ny asa izay ny tanjony dia ny fanaovana kopia nomerika, fa ho an'ireo izay hatao pirinty amin'ny fampiasana rafitra analog dia tsy mandeha foana izany. "
Na eo aza ny fomba samihafa, ny toerana misy antsika dia mitovy amin'ny ao ambadika ary mitovy endrika amin'ny endriny ary ny fehin-teninay dia mitovy amin'ny heviny fa ireo programa roa ireo dia mifanaraka tanteraka amin'ny famoronana sary nomerika ary na dia atao pirinty amin'ny alàlan'ny famoahana nomerika aza. , mpanonta inkjet, ohatra.
Etsy ankilany, matetika aho dia miatrika a "genius" ny fanoharana dia tsy azo atao pirinty amin'ny fampiasana rafitra analog -offset, flexo na rotogravure-Tsy noho ny olan'ny famoronana, fa noho ny GIMP tsy manana fitaovana ilaina. Amin'ity tranga ity, na matihanina toy inona ianao, dia tsy afaka hahatratra ny tanjona.
Ny manararaotra ny fampitahana anao dia toy ny manandrana manao manicure miaraka amin'ny hety manety sy manjaitra tena tsara.
Salama Tina. Eny, afaka misaotra anao fotsiny aho, tamin'ny fizaranao ny fahalalanao tao amin'ilay lahatsoratra sy ny hevitrao nomena ny hevitro.
Ny hevitro dia tsy nifanohitra velively tamin'ny anao, fa ny mason'ireo tsirairay avy kosa dia nanasongadina lafin-javatra samy hafa amin'ilay zavatra taratra taratra. Nifantoka tamin'ny maha-zava-dehibe ny fahafahan'ny fitaovana arakaraka ny tanjona manokana ianao, ary te-hanasongadinana ny maha-zava-dehibe ny agents mampiasa azy ireo sy ny sandan'ny (estetika na ny fampiasa) ny valiny. Midika izany fa ny hety "fanaovana akanjo" dia azo antoka fa tsy mety amin'ny manicure, fa eo am-pelatanan'ny manicurist tsara, dia mety hanana vokatra tsara kokoa noho ny azony amin'ny tanana tsy dia mahay na mamorona izy amin'ny fampiasana hety.
Manantena aho fa hanohy hizara ny fahalalanao, ny fisaintsainanao ary ny fihetsikao amin'ny fifanakalozan-kevitra (toy ny fanajana fa mahatsikaiky) amin'ny lahatsoratra ho avy.
Salama Tina. Tamin'ny voalohany, tena tiako ny namaky ny hevitrao tao amin'ireo lahatsoratra soratanao eto. Fa izao, rehefa mamaky ny lahatsoratrao dia tsy maintsy milaza aho fa… Tiako izany! Soa fa Elav sy ireo hafa dia namela anao hiditra amin'ny ekipa Desdellinux. Milamina sy milamina ny asa soratanao, mifamatotra tsara ny hevitrao, ary mijanona ho mirindra ny lahatsoratra manontolo. Manantena aho fa hanohy hamaky bebe kokoa ny lahatsoratrao. !! Arahabaina !! Miarahaba ary mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka.
Misaotra betsaka amin'ny teninao, faly aho fa tianao ilay izy ary manantena ny ho eto mandritra ny fotoana ela aho.
Ho lasa FanBoy ho anao aho raha miresaka lohahevitra GIMP misimisy kokoa. Miarahaba anao ary tratry ny taona vaovao!
Misaotra an'arivony, tsara ho ahy, hahafinaritra ahy izany ... raha manome alalana ahy ireo izay manapaka ny kaody ato amin'ity bilaogy ity dia mamorona fampianarana vitsivitsy hampiasaiko aho GIMP.
Mifanaraka amin'ny iray amin'ny fomba fanitsiana ny loko tsara ve ianao?
Ireo nanapaka cod ... ok andraso, avelao aho hanontany azy ireo ... LOL !!!
AZO antoka fa azonao atao izy ireo, mbola misy ... ny fandraisana anjara rehetra ataonao dia ho raisina tsara, azo antoka fa tena tsara ny hafatrao 🙂
Hevitra tsara raha ekenao ny fizarana amin'ny GIMP ary tsara raha atomboka amin'ny lohahevitra "tsotra" toy ny ny loko . Miarahaba ary mirary soa 😉
Mamorona sokajy vaovao aho izao ~ » GIMP
Subcategory an'ny Sary / Fanovana / Sary
QWebkit, maninona raha mampiasa Gecko?
Guitarix: Simulator Guitar Amp ho an'ny Linux